Chii chinonzi kufunga? - Zvekubatsira Zvekushandisa | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Munguva dzichangopfuura pakave nekukwira kwakakura munzira dzekuzorora dzetsika dzechiHindu. Kunyangwe kune vanhu vazhinji kumadokero kwenyika, kufungisisa, iyo yoga kana kufunga chinhu chiri chitsva, chokwadi ndechekuti Aya ndiwo maitiro ayo maBhudha ave achiita kweanopfuura makore mazana maviri nemazana mashanu.
Izvi zvinowanzo kutungamira mukuvhiringidza kana kusanganisa mazwi, nekuti aya inyowani nyowani kana zvishoma zvinozivikanwa nyaya mukudzika. Kuti, vanhu vazhinji vanowanzo nyonganisa kufungisisa nekufunga, ayo, kunyangwe iwo ari zvakafanana, hausi iwo mubvunzo mumwe chete. Zvakare kutaura, kufungisisa inzira inova chikamu chekufunga uye izvi pachezvayo zvine zvakawanda zvakavanzika uye zvakadzika kumashure izvo zvakakosha kuti uongorore.
Kungwarira kunogona kutsanangurwa se chiito chekutarisa pane izvozvi, kuteerera kune kuno uye ikozvino, uchitarisa pane zviri kuitika panguva ino, kuzvigamuchira sezvazviri, pasina kuzvitonga uye pasina chinangwa chekuzvichinja. Ndokunge, kutarisisa pauri uye nezvinoitika zvakakukomberedza, kudzidza kudzivirira ruzha kana chero eakawanda aripo zvinovhiringidza.
Kwemakumi emakore, kufunga kwakashandiswa senzira yekurapa yekurapa kusagadzikana. Sezvo, kuburikidza nekufungisisa uye kuisa pfungwa pakufunga, zvinogoneka exponentially kugadzirisa mamiriro epanyama uye epfungwa evanhu. Saka inzira yakakurudzirwa kwazvo kune chero munhu, kunyangwe kushanda nevana pakuzvidzora kwavo.
Ichokwadi, kufunga kwakashandiswa kwemakore mazhinji kune varwere vane zvirwere zvisingaperi, sezvo zvakaratidzwa kuva zvinobudirira mukurapa kurwadziwa kusingaperi. Iyo inoshandiswawo munzvimbo zhinji dzekudzidzisa, ku shingairira kushanda uye kugadzirisa kunetseka muvadzidzi. Chinhu icho, pasina kupokana, chichaitwa muzvikoro zvakawanda, nekuda kwezvakawanda mabhenefiti akaratidzirwa kwezviuru zvemakore.
Vanhu vanoita kufunga, izvo zvavanosangana nazvo kubatana kwakasimba kwega, nemanzwiro ake, nemuviri wake nepfungwa dzake. Izvo zvinotungamira mukuvandudza hukama hwako neako wega, kuzvigamuchira uye, pakupedzisira, chishandiso chine simba chekugadzirisa manzwiro ako nenzira ine hutano.
Kana iwe uchida kutsvakisisa mune hunyanzvi hwekare hwekufunga, zvakakosha kuti utange wawana zvese izvo zvine hunyanzvi hwechiBhudha. Nekuti sezvawatoona, hazvisi zvekufungisisa pasina zvimwe, asi ndizvo mubatanidzwa wemaitiro ese ane hukama, seyoga, kufema kufunga kana kufungisisa pachako.
Mune aya mapeji auri kuzowana, mukati mechikamu chekufunga, iwe unozogona tsvaga marudzi ese eruzivo zvine hukama nehunyanzvi uhu hunobatsira vese uye munzira dzese. Iwe unozowana matekinoroji akasiyana nawo ekuti utange mukufunga uye matipi ekuti uzvizive iwe zvirinani kuti ushandise kufunga muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Zvakare kuda kuziva uye kurovedza muviri kudzidzira matekinoroji akasiyana anoita kufunga.
Kuzviziva pachako nenzira yakakosha, yechokwadi, kugamuchira yega yega maseru anoumba wega, ndizvo nhanho yekutanga kuona kusarudzika kwemunhu wega wega. Nekuti usati wagona kushanda pauri, mune izvo zvinhu izvo zvaungade kugadzirisa, zvakafanira kuti ugamuchire izvo zvauri, uzvide iwe pachako uye uzvidzivirire iwe pachako usingazvirange iwe pachako pane zvausiri kana nezvausingakwanise kuita.
Kungwarira kuchakubatsira iwe kubatana neako wekare chinyakare, padanho iro iwe chete raunogona kuwana. Iwe uchakurumidza kushamisika kuona kuti sei hutano hwako hwepanyama uye hwepfungwa hunofarirwa, sezvo paine mabhenefiti mazhinji eiyi nzira iyo maBuddha ave achidzidzira kwemakore akawanda kwazvo.
Yoga semushonga weNeural wehuropi
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 2 makore .
Kana iwe uri munhu anoshandisa iyo yoga, zvinopfuura zvingangoita kuti iwe wakasangana nemuviri, wepfungwa uye wepamoyo mabhenefiti ...
45 Buddha zvirevo zvizere nehungwaru
Mazuva ano unogona kuona Buddha kwese kwese sezvo ari mucherechedzo wehungwaru nerunyararo ...
Zvakanakira mimhanzi inozorodza
Vanhu vanogara mukuenderera mberi kwekushushikana nekushushikana ... isu tiri munharaunda inowedzera inoda kuti ...
Chii chinonzi kushivirira uye maitiro ekuzviita muhupenyu hwako
Isu tinorarama munharaunda ine chipatapata umo zvese zvinofanirwa kuve nekukurumidza. Hatizive kumirira uye kana patinofanira kunyange, ...
Ndeapi mabhenefiti ekupenda mandalas
Mazuva ano kune vanhu vanoita kuti mandala anyorwe paganda ravo nekuti ivo vanonzwa izvozvo nekungovatarisa ...
Kungwarira kweVakuru uye Vana - Maitiro, Zvishandiso, Matekiniki uye Bhenefiti
Izwi rekuti Kufungisisa rinoshandiswa zvakanyanya mazuva ano maererano nematanho anoshanda ekuderedza ...
Matipi mashanu ekubatanidza Kungwarira mune rako zuva nezuva
Maitiro ekufunga anotanga kuve anonakidza chaizvo kana isu tichikwanisa kuzvibatanidza muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Chero chiitiko chezuva nezuva ...
Vanotiudza mumaminetsi mashoma kuti ndeipi nzira yakanakisa yekudzikama
Mwedzi wapfuura ndakasangana neYouTube chiteshi chinonzi "Diabetes Alliance". Kune huwandu hwe ...
Kungwarira kunatsiridza kuverenga kwekuverenga uye kuisa pfungwa
Kana iwe uchifunga kuti kusakwanisa kwako kuisa pfungwa hakugadzirisike, warasika. Sekureva kweongororo yakaitwa nevanoongorora ...
Kungwarira muzvikoro kunoderedza kushushikana kwezviratidzo muvachiri kuyaruka
Vadzidzi vechikoro chesekondari vakatora chirongwa cheKufunga chakadzora zviratidzo zvekushushikana, kushushikana uye kunetseka kusvika pamatanhatu ...
Kufungisisa kunogona kubvisa iyo "yakanyura mutengo" kusarudzika mumaminitsi gumi nemashanu
Iwe unogona kunge uchishamisika kuti chii "chakanyura mutengo" rusarura. Kune avo vasingazive, rusarura ...
Kungwarira Kudzidzira kana Kufunga